Ivenkile yeApple eBordeaux (eFrance) izakufumana ulungiso lwangaphakathi | Ndisuka mac
Ivenkile yeApple eBordeaux (eFrance) iya kufumana ukulungiswa kwangaphakathi
Nangona uninzi lweeVenkile zeApple kwihlabathi liphela sele zivulekile ngokwesiqhelo, emva kokubandezeleka ukuvalwa okuninzi ngenxa yobhubhaneEzinye zazo zineeyure ezikhethekileyo kwaye ezinye, ubuncinci, zisavaliwe. Nokuba ezinye zazo ziya kuba neeyure ezikhethekileyo kodwa hayi ngenxa ye-COVID-19 kodwa ngenxa yemisebenzi kulwakhiwo lwazo okanye ukulungiswa ngaphakathi. Yiloo nto eyenzekayo kwivenkile eseBordeaux (eFrance) ngokweengxelo zamva nje uya kufumana umphakamo wobuso bangaphakathi.
IiVenkile ezininzi zeApple zineeyure ezikhethekileyo ngenxa yezithintelo ngenxa yesifo sehlabathi. Ezo zivulekileyo kukuqokelela iimveliso ezithengwe kwi-Intanethi kunye nokunika inkxaso yezobugcisa kwiGenius Bar ngokuqeshwa. Okwangoku abayisebenzisi indawo yokungena. Ezinye iiyure zithintelwe ngaphezu kwako konke ngenxa yemigaqo yezopolitiko emiselwe ishishini.
Ivenkile yeApple eBordeaux eFrance, ivulwe nge-14 ka-Meyi ka-2011, malunga nento eza kuba sisikhumbuzo seminyaka elishumi kungekudala. Ngoku kuye kwaziwa ukuba kungekudala uza kuba neshedyuli ekhethekileyo ngakumbi kunale anayo ngoku, ngenxa yokuba azokuphakanyiswa ebusweni. Olu hlengahlengiso luya kwenziwa ukulungiselela ivenkile kwiindlela ezintsha kwaye zenze ukuba zifane ngakumbi nezikhoyo kwihlabathi liphela. Kuyinyani ukuba umsebenzi uya kwenziwa ngaphandle kweeyure zeshishini, ngenxa yeso sizathu kwaye ngenxa ye-COVID, iiyure zeVenkile ye-Apple ziya kuba ngaphezulu kokukhethekileyo. Kuqikelelwa ukuba umsebenzi wezorhwebo uza kwenzeka during isiqingatha sosuku.
Sicinga ukuba baya kufaka izikrini ezintsha ukuqaqambisa eminye yemidlalo efumaneka kwiApple Arcade kunye needemo ezisebenzayo ngeekhowudi zeQR. Njengoko sele kubonisiwe kwezinye iivenkile zenkampani ezisandula ukulungiswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ivenkile yeApple eBordeaux (eFrance) iya kufumana ukulungiswa kwangaphakathi
I-Apple ibamba amalungelo kwi-CODA ngokuhlawula ixabiso
IPixelmator Pro 2.0.4 iphucula ukusebenza kwayo kweML Super Resolution